Cafezee Hack | Shwekoyantaw
Published : 10:26 PM Author : shwekoyantaw
Cafezee ကို hack ကြရအောင်ဗျာ.(ဒါများ လွယ်လွယ်လေး လို့ ပြောကြမယ် ထင်တယ် .. Tutorial တစ်ခုအနေနဲ့ပါ) ကြိုးစားပြီး အပြည့်စုံဆုံး ဖြစ်အောင် ရေးထားပါတယ်။
အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားပါသည်။ပထမပိုင်း ကို သင် အင်တာနက် ဆိုင်ရောက်၍ စတင် သုံး သုံးခြင်း လုပ်ဆောင်ရမည်။ ဒုတိယပိုင်း သည် သင် သုံး၍ ပြီးလျှင် လုပ်ဆောင်ရမည်။
c:\_WINDOWS\_system32 အောက်ရှိ client.pra နဲ့ client2.pra ဆိုတဲ့ file နှစ် file ကို copy ကူးပြီး Desktop ပေါ် paste ချပါ။(ပုံမှန်အတိုင်း ၄င်းနှစ်file သည် system32 အောက်တွင် ရှိသည်. မရှိပါက တစ်ခြား partition ထဲသို့ ၀င် Cafezee folder အောက်တွင် ၀င်ရှာပါ။
၄င်း နှစ် file အား Microsoft access ဖြင့်ဖွင့်ပါ။Password တောင်းပါလိမ့်မည်။(vanarp117)ဟု ရိုက်လိုက်ပါ။
ပွင့်သွားပါက Control သိ်ု့ဝင်ပြီး Admin password (အောက်ပုံမှာ အနီရောင်နဲ့ တားထား) ကို ဖျက်လိုက်ပါ။
ပြီးလျှင် ထွက်လိုက်ပါ။ (save လုပ်စရာမလိုပါဘူး.. လုပ်လို့လဲမရပါ save နေရာတွင်
နှစ် file စလုံး ကို ထိုအတိုင်းလုပ်ပါ။
ပြီးလျှင် Ctrl+alt+delete ဖြင့် Task manager ခေါ်ပြီး Explorer.exe အား end process လုပ်ခြင်းဖြင့် Cafezee အား Kill လိုက်ပါ။(Explore.exe ဖြစ်သည် explore.exe မဟုတ်ပါ)
ပြီးလျှင် ခုန ပြင်ထားတဲ့ နှစ်file ကို မူလ နေရာသို့ ပြန်ကူးထည့်လိုက်ပါ။ နာမည်တူ ရှိနေ၍ overwrite မလားဟုမေးမည် .. yes to all ပေးလိုက်ပါ။
Cafezee အားပြန် run ပါ..
Cafezee ရဲ့  Admin option ထဲဝင်ပါ။ password တောင်းမည်။ ဖျက်ပြီးပြီ ဖြစ်၍ ဘာမှ မရိုက်ပဲ OK နှိပ်လိုက်ပါ။ သူ့ရဲ့  Admin ထဲဝင်သွားပါပြီ။
အဲ့ဒိမှာ ဘယ်ဘယ်အောက်ထောင့် နားလောက်မှာ Adjustment ဆိုတာရှိတယ် နှိပ်လိုက်ပါ..
TextBox နှစ်ခု အသေးတခု အကြီးတခု တွေ့မယ် . အောက် အကြီး က comment.. အပေါ်တခု မှာ လျှော့ ချင်တဲ့ amount ကို ရိုက်ရမည်.
ဥပမာ-(ပိုက်ဆံဖြင့် သုံး သူဆိုလျှင် ကိုယ်ကျ တဲ့ ပိုက်ဆံ က ၅၀၀ ဆိုရင် အဲ့ဒိမှာ ၅၀၀ ထိအများဆုံးလျှော့ လို့ရတယ်)
(Member ဆိုရင် ကိုယ်သုံးထားတယ့် အချိန် က ၁နာရီခွဲ ဆိုရင် မိနစ်နဲ့ တွက်ရင် ၉၀ မိနစ် .. မိနစ် ၉၀ ထိ အများဆုံးလျှော့လို့ ရတယ်)
လျှော့ပြီးပြီဆိုရင် close session နှိပ်ပါ။ (Continue နှိပ်လို့မရပါ ဘာမှထူးမည်မဟုတ်ပါ)
Cafezee ကို kill ပြီး file နှစ် file ကိုပြန်ထည့် တာ။ ပြန် run တာ။ ကို မြန်နိုင် သမျှ မြန်မြန် ပြုလုပ်ပါ။
သင်လျှော့ သည့် ပမာဏ သည်လဲ ယုတ္တိတန် ပါစေ..
Task manager အား ပိတ်ထားသည် ဆိုပါက အောက် တွင် ပေးထားသည့် Kill Process ကိုဒေါင်းပြီး kill နိုင်ပါသည်
Microsoft access မရှိပါက လည်း သုံးနိုင် ရန် အောက်တွင် portable Microsoft office 2003 အား download လုပ်နိုင်ပါသည်။ သင့် pen drive ထဲထည့်၍ လိုအပ်သည့် အချိန်အဆင်သင့်သုံးပါ။
Portable MSoffice 03
Credit To Original Uploader And To Me ZoDi@c
Labels: cafezee, tutorial |